Vanopisa Kuchinjana Vagadziri - China Heat Shanduri Fekitori & vanotengesa
Pipe Inodziya Inopisa Vanopisa
Chinhu Chikuru chePipe Heat Heat Exchangers 1. Kushandisa chubhu ine hydrophilic aruminiyamu yekupedzisira, yakaderera mweya kuramba, isina kudzikisira mvura, iri nani anti-ngura. 2. Yakavezwa simbi furemu, yakanaka kurwisa ngura uye yakakwirira mukurumari. 3. Chikamu chekupisa chekupisa chinoparadzanisa sosi yekupisa uye sosi inotonhora, ipapo mvura mukati meiyo pombi haina kupisa kupisa kunze. 4. Yakasarudzika yemukati yakavhenganiswa mweya mamiriro, yakawanda yunifomu yekupararira kwemhepo, ichiita kupisa kupisa kwakawanda. 5. Zvakasiyana wor ...
Sei iro desiccant vhiri rinoshanda? Iyo yakapusa yakaoma desiccant vhiri rinoshanda pane musimboti we sorion, inova iyo adsorption kana iyo nzira yekumwa nayo iyo iyo desiccant inobvisa mweya wemvura zvakananga kubva mumhepo. Mhepo yekuomeswa inopfuura nepakati peiri desiccant vhiri uye iyo desiccant inobvisa mhute yemvura yakananga kubva mumhepo uye inoibata iyo ichitenderera. Sezvo iyo nyoro-yakatakurwa desiccant ichipfuura nepakati pechikamu chekumutsiridza, iyo mhute yemvura inoendeswa kune inopisa mweya rwizi, inova ...